Tag: twitter humor | Martech Zone
Tag: twitter humor
Tọzdee, Eprel 30, 2009 Sunday, Eprel 24, 2016 Douglas Karr
Nke a nwere ike ịbụ ihe atụ kasịnụ nke ara nke Twitter. Echere m na m na-agbaso mmadụ 5,000 n'ihi na otu n'ime 1,000 tweets ọ bụla bara uru. Lelee vidiyo ahụ ị ga-ahụ ihe m hụrụ. N'agbanyeghị na ara niile ahụ, m ka hụrụ Twitter n'anya n'agbanyeghị! Nke ahụ bụ ebe m hụrụ vidiyo a, n'ezie!